255 000 Zimbabweans apply to stay | News24
255 000 Zimbabweans apply to stay
Nearly 255 000 Zimbabweans took advantage of the government’s special dispensation to legalise their stay in South Africa, a home affairs spokesperson said today.
Ronnie Mamoepa said the final figure for Zimbabweans who applied to legalise their stay in the country stood at 254 802.
By 4pm on Friday, which was the cut-off date to apply, the figure given by home affairs was 250 633.
“The process of adjudicating their applications will now begin,” Mamoepa said.
Many of those who applied were waiting to receive Zimbabwean passports. It was reported in early December that the Zimbabwean government had received more than 30 000 applications for passports but was only capable of processing 500 passports a day.
Attempts to obtain comment from the Zimbabwean Consulate in Johannesburg on how many passport applications were received were unsuccessful.?